आफ्नै होटललाई अस्पताल बनाउँदै सुपरस्टार रोनाल्डो::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
आफ्नै होटललाई अस्पताल बनाउँदै सुपरस्टार रोनाल्डो
रोनाल्डोले लिस्बनमा रहेको आफ्नो सुविधा सम्पन्न होटल ‘पेस्टाना सीआर–७’ लाई अस्थायी रूपमा अस्पतालमा परिवर्तन गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रि«य सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
रोनाल्डोले होटललाई सात दिनभित्र अस्पतालमा परिणत गरेर कोरोना संक्रमित विरामीको नि:शुल्क उपचार गर्न लागेको बताईएको छ । रोनाल्डोले विरामीको उपचार, औषधी, बस्ने र खाने सबै खर्च नि:शुल्क गर्न लागेका हुन् । उपचारमा सम्लग्न डाक्टर, नर्स र प्राविधिकको खर्च पनि रोनाल्डोले ब्यक्तिगत गर्नेछन् ।
इटालीबाट आमालाई भेट्न पोर्चुगल पुगेका रोनाल्डोलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै घरमै ‘क्वारेन्टाइन’ मा राखिएको थियो । तर प्रशिक्षणपछि उनमा कोरोनाको संक्रणम फेला परेको थिएन । पोर्चुगलमा शनिबारसम्म एक सय ६९ जनालाई कोरोना संक्रमित भएको पृष्टि भएको छ । अहिलेसम्म कसैको ज्या`न भने गएको छैन।
टोकियो ओलम्पिक १ वर्षका लागि स्थगित
सबैभन्दा महँगो फुटबल टोली, लिभरपुल
नेमारको मूल्य १३ करोड ५० लाख पाउन्ड !
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ५० वटा हेलिकोप्टर आउने मुल्यमा किनेको कार कस्तो छ ?
कोरोना त्रासः युरोकप फुटबल सार्न आग्रह